ပေါက်ဈေး စင်ကာပူ <-> မြန်မာ ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှု
ရွှေမြန်မာများရဲ့ ပိုလျှံနေသော အသပြာများကို စလုံးမှ မြန်မာ ၊ မြန်မာ မှ စလုံးသို့ ၂၄နာ၇ီအတွင်း အမြန်ဆုံး နင့် ပေါက်ဈေးအများဆုံး အိမ်တိုက်ရာရောက်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြင့်ငွေလွှဲပေးနေပါပြီ။စင်ကာပူဘက်ကလွှဲမယ် ဆိုရင်လူကိုယ်တိုင်အပင်ပန်းခံ၊အချိန်ကုန်ခံလို့ ပို့ နေစရာမလို တော့ပါ။ bankအကောင့်ကနေလွှဲရုံနဲ့ ရပါတယ်။ နယ်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာဘဏ်ကနေလွှဲပေးပါတယ်။
ပေါက်ဈေး ငွေလွှဲ ၀န်ဆောင်မှု
Pout Zay Facebook
Student များ နှင့် မြန်မာမှ စလုံးသို့ ငွေလွှဲမည့်သူများအတွက် အထူးအစီအစဉ်အနေနှင့် ရန်ကုန်မြို့တွင်းကို အိမ်တိုင်ရာရောက် ငွေလက်ခံ ၀န်ဆောင်မှုပေး ပါတယ်။၁နာရီအတွင်း SG bank account ထဲသို့ best rate( ပေါက်ဈေးထက် သုံးကျပ် လျော့တဲ့ နှုန်း) နဲ့ ငွေလွှဲပေးနေပါတယ်။ S$1000 နဲ့ အထက် မြန်မာမှ စလုံးသို့ ငွေလွှဲသူများအား S$5dollar, S$10000 နဲ့အထက်ကို S$10 ထပ်ပေါင်းချီးမြှင့်ပေးပါမည်။ အားပေးမှုအား ကျေးဇူးတင်လျှက်.....(poutzay@gmail.com)
Posted by ပေါက်ဈေး at 05:233comments:
၁ စင်ကာပူဒေါ်လာ = ကျပ်
(၂၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁)
မြန်မာပြည်ဘက်မှ စလုံးသို့ လွှဲမယ်ဆိုရင် Student များအတွက်အထူးအစီအစဉ်အနေနှင့် ရန်ကုန်မြို့တွင်းကို အိမ်တိုင်ရာရောက် ငွေလက်ခံ ၀န်ဆောင်မှုပေး ပါတယ်။ ၁နာရီအတွင်းSG bank account ထဲသို့ best rate နှင့် ငွေလွှဲပေးပါမည်။ ပေါက်ဈေး ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှု Singapore -94567534 , Myanmar – 095011684 , 0973180833, poutzay@gmail.com
ပေါက်ဈေး ငွေလွှဲ ၀န်ဆောင်မှု Facebook
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၃ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေပိုင်း ...
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့ညနေပိုင်း @ ၅...
Pout Zay Money Transfer blog />
Pout Zay Money Transfer blog/a>
ပေါက်ဈေး. Picture Window theme. Powered by Blogger.